नकारात्मक सोचहरुबाट तपाईंको मस्तिष्कलाई कसरी मोड्ने ? | सुदुरपश्चिम खबर
नकारात्मक सोचहरुबाट तपाईंको मस्तिष्कलाई कसरी मोड्ने ?
यदि तपाई असफल हुनुभयो भने तपाईंको मस्तिष्कमा नकारात्मक विचार घुम्ने सम्भावना रहन्छ र यसले तपाईंलाई मानसिक चुनौती दिनसक्छ । यस्तो विचारबाट माथि उठ्नका लागि आफैँसँग राम्रा प्रश्नहरू सोध्नुस् । त्यस पूर्ण घटनामा कुन एउटा राम्रो पक्ष थियो, त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गर्नुस् । याद गर्नुस्, आफैंमाथि प्रश्न गर्ने र हरेक अवस्थामा केही राम्रो खोज्ने बानीले तपाईंको मस्तिष्कलाई सबै नकारात्मक विचारबाट मोड्ने काम गर्छ । रातोपाटी बाट सभार
स्थानीय तहले भने : प्रदेश मातहत राख्ने प्रस्ताव अस्वीकार्य
त्रिविका परीक्षा स्थगित हुँदैनन् : परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी